Wararkii Caawa & Suuqa Kala Iibsiga – Manolas – Arsenal, Griemann – United, Calhanoglu – Chelsea – Maxaase ka cusub kooxdaada? | Laacibiin & Baahin – News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs	Tuesday, January 17th, 2017	Home
Wararkii Caawa & Suuqa Kala Iibsiga – Manolas – Arsenal, Griemann – United, Calhanoglu – Chelsea – Maxaase ka cusub kooxdaada?
Jan 11, 2017 - Aragtiyood	Suuqa Kala Iibsiga ayaa furan, kooxaha ayaana ku dagaalamaya iney heshiisyo waa weyn sameeyaan mudada 20-ka beri ka yar ee haatan suuqa uu furnaan doono.
Si kastaba, waxaan halkan idiinku soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee Suuqa Kala Iibsiga caawa iyo kooxaha ciyaaryahanada ay doonayaan.
– Chelsea ayaa dalab lama diidaan ah ugacan gelisay kooxda Bayer Leverkusen, waxaana ay dooneysaa kubad sameeyaha Hakan Calhanoglu, macalin Antonio Conte ayaana xidigan qaranka Turkey ka dhigan doona badalka Oscar oo ku biiray China.
– Kooxda Man United ayaa qorsheyneysa iney saxiixyo waa weyn sameyso, waxaana ay isha ku haysaa afar ciyaaryahan oo uu kamid yahay Griezmann – Riix Halkan Akhriso Heshiisyada macquulka ah – Kooxda Everton ayaa soo diiday dalab amaah ah oo laga soo gudbiyay James McCarthy, kooxdan ayaana dooneysa in heshiis joogta ah ay qadkan dhexde ku iibiso.
– Dhanka kale Everton ayaa lasoo sheegayaa iney £15m ku dalbatay bartilmaameedkii kooxaha Chelsea iyo Man United Franck Kessie, laakiin naadiga Atalanta ayaa soo diiday.
– Tababare Sam Allardyce ayaa qorsheynaya inuu kooxda Crystal Palace ka diro weeraryahanka Christian Benteke isagoo doonaya in lacagta uu ka helo weeraryahankan kusoo ibsado xidigo cusub.
Kooxda Arsenal ayaa laga soo diiday dalab 40Milyan ah oo ay ka gudbiyeen daafaca Kooxda Roma Kostan Manolas kaas oo sidoo kale bartilmaameed u ahaa kooxaha Inter Milan iyo United, laakiin naadiga Roma ayaa ogolaan karta iney iibiso daafacan reer Greeg hadii loo gacan geliyo lacag dhan £50 million.
– Tababaraha Kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa rajeynaya inuu lasoo saxiixdo kubad sameeyaha kooxda Bayer Leverkusen Julian Brandt, laakiin waxaa ay dagaal kala kulmayaan naadiga Bayern Munich oo dooneysa shaqada xidigan.
= Kooxda Tottenham Hotspur ayaa diyaar u ah iney udhaqaaqdo saxiixa weeraryanka kooxda River Plate ee Koofurta Ameerika Sebastian Driussi.
– Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa ku dhawaanaya inuu West Ham kala soo saxiixdo Michail Antonio waxaa uu sidoo kale bishan January doonayaa daafaca bidix ee naadiga Koln Jonas Hector.
– Kooxda West Ham ayaa isku diyaarineysa iney Barcelona ka dulqaado daafaca Yerry Mina. kooxda ka dhisan Camp Nou ayaa mudo raadineysay daafacan naadiga Palmeiras laakiin waxaa haatan heshiskaas ka dulqaadaya naadiga West Ham.
– Arsenal ayaa cadaadis xoogan uu ka haystaa mushaarka uu dalbanayo Alexis Sanchez, xili xidigan uu dalab weyn ka helayo naadiga PSG
– Kooxda Tottenham ayaa isha ku haysa saxiixa Nico Gaitan laakiin naadiga Atletico Madrid ayaanan dooneyn iney iibiso garabkan bidix.
– Kooxda Roma ayaa isha ku haysa saxiixa garabka da’yarka ah ee Chelsea Charly Musonda kadib markii ay xagaagii hore ku guuldareysatay saxiixisa, heshiiskan ayaana noqon doona mid amaah ah.
– Kooxda Swansea City ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Liverpool laga nacay ee Mamadou Sakho.
– Xidiga amaahda ku jooga Sunderland ee Adnan Januzaj ayaa xiiso ka helaya naadiga France ka dhisan ee Lyon, sidas saxaafada Paris ayaa tabineysa.
– Tartanka loogu jiro saxiixa Jeff Schlupp ayaa gaaray heer sare waxaana isku haysta Crystal Palace, Aston Villa iyo West Brom laakiin kooxahan waxaa qasab ku ah iney la kulmaan qiimaha ay Leicester City dooneyso oo ah £12m.
– War layaab leh ayuu noqonayaa hadii Bournemouth ama Swansea ay amaah ku qaataan John Terry, laakiin saxaafada Ingiriiska ayaa haatan sheegeysa in kabtan John Terry uusan meelna uga socon Stamford Bridge.
– Dhanka kale Swansea City ayaa ku dhawaaneysa saxiixa gooldhaliyaha Leicester City Leonardo Ulloa si uu badal ugu noqdo ciyaaryahanka bartilmaameedka u ah Chelsea ee Fernando Llorente.